- Otu esi akwaga Canada -
Ihe karịrị otu nde ndị kwabatara ọhụrụ ga-abata na Canada n'etiti 2020 na 2023! Enwere ọtụtụ ụzọ isi kwaga Canada wee nweta ebe obibi na-adịgide adịgide. N'ikpeazụ, ha raara ndị otu mbata na ọpụpụ Canada mee ka ihe dị mfe dịka o kwere mee.
Enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ 80 dị iche iche ịbịa Canada! Ka ọ dị ugbu a, iji mee ka ihe dịrị ndị na-agụ akwụkwọ anyị mfe, anyị ga-akọwapụta isi mbata na ọpụpụ Canada.
O siri ike ịkwaga Canada. Iji tinye akwụkwọ nke ọma wee nweta ya Mbata nke Canada, mmadụ ga-agafe ọtụtụ usoro. Ọzọkwa, usoro ahụ nwere ike were ọtụtụ ọnwa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ afọ.
Ị nwere ike ịkwalite ohere ịga nke ọma gị wee belata "ọnyà," nsogbu, na igbu oge. Ọ bụrụ na ị maara nhọrọ dị.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịmụta ka esi akwaga Canada n'ụzọ dị iche iche. Gụnyere ebe obibi na-adịgide adịgide, ịrụ ọrụ, nleta na ọbụna ọmụmụ ihe.
Kedu onye bụ nwa amaala nke obodo pụrụ iche?
Tupu ịmụta ka esi akwaga Canada wee bụrụ nwa amaala, onye bụ nwa amaala? Kedu ihe na-eme ka mmadụ bụrụ nwa amaala nke ndị uwe ojii.
Citizens nwere oke oke ikike na uru. Ụmụ amaala nwere ohere gbasara ahụike, ọrụ mmekọrịta na nkwado iwu.
Nwa amaala Canada nwere nnwere onwe ibi, ịrụ ọrụ na ọmụmụ ihe n'ebe ọ bụla na obodo ahụ. votu na Canada ntuli aka.
Nke dị mkpa, enweghị ike ijide ma ọ bụ wepụ ọbụbụ nwa amaala gị. Ha nyere onye ọ bụla a mụrụ na mba ahụ ikike ịbụ nwa amaala na Canada ozugbo.
Ọzọkwa, ụmụ amaala mba ofesi nwekwara ike ịghọ ụmụ amaala Canada n'onwe ha site n'ịgbaso usoro ndị mbata na ọpụpụ, ndị gbara ọsọ ndụ, na ụmụ amaala Canada (IRCC) depụtara.
Kedu ihe bụ onye obibi na-adịgide adịgide?
Ka ị na-amụta ka esi akwaga Canada, ọ ga-abụrịrị na ị ga-achọ ịbụ onye obibi na-adịgide adịgide. Ị maara onye na-adịgide adịgide bụ?
Nke mbụ, onye na-adịgide adịgide bụ nwa amaala nke obodo ọzọ nke enyere ikike ibi na Canada na-adịgide adịgide.
Ozugbo e nyere mmadụ ọkwa obibi na-adịgide adịgide, mmadụ nweere onwe ya ibi na ịrụ ọrụ ebe ọ bụla na United States.
Ọzọkwa, ọkwa a na-enwetakwa ọtụtụ uru na Canada. Gụnyere ịnweta ahụike na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nnwere onwe ibi ndụ, ọrụ, na ọmụmụ ihe n'ebe ọ bụla na mba ahụ. Ọzọkwa, nchekwa iwu.
Nke abụọ, ndị bi na-adịgide adịgide nwekwara ike itinye akwụkwọ ka ha bụrụ Ụmụ amaala Canada. Mgbe a ụfọdụ oge dị ka na-adịgide adịgide bi! Ndị bi na Canada, dịka ọmụmaatụ, enweghị ikike ịtụ vootu na ntuli aka Canada.
Otu esi akwaga Canada na nhọrọ 5 maka ịkwaga Canada
Gọọmentị Canada emela ọtụtụ mgbanwe na mbata na ọpụpụ iji kwụsị mgbasa nke Coronavirus. Mụta maka mmetụta coronavirus na mbata na ọpụpụ Canada Ebe a.
N'okpuru bụ ozi dị mkpa maka otu esi akwaga Canada:
1. Mmemme Nbanye Express
Ntinye Express bụ mmemme mbata na ọpụpụ Canada na-enye ndị ọrụ ruru eru ibi na ịrụ ọrụ na Canada.
Citizenship and Immigration Canada (CIC) ga-enyocha, were were, wee họrọ ndị mbata bụ ndị nwere nkà. Na/ma ọ bụ nwee ihe achọrọ n'okpuru mmemme mbata na ọpụpụ akụ na ụba gọọmenti etiti site na iji usoro ọhụrụ.
Mmemme ndị ọrụ gọọmentị etiti (Federal Skilled Worker Programme) (FSWP)
Mmemme Federal Skilled Trades Programme (Federal Skilled Trades Program) bụ (FSTP)
Klas Ahụmịhe Canada bụ maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịmụ gbasara Canada (CEC)
Ọzọkwa, ógbè na ókèala onye ọ bụla ga-eji Ntinye Express usoro. Iji nyere aka were ndị na-achọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị dị ka akụkụ nke Mmemme Nhọpụta Mpaghara ha. Ịhụ na eju afọ ahịa ahịa ọrụ.
2. LMIA Ọrụ Visa
Ọtụtụ ndị na-achọ maka mbata na ọpụpụ Canada na-enweta ọrụ na Canada. Dị ka itinye akwụkwọ maka visa ọrụ ma mechaa kwaga Canada na ndabere ahụ.
The LMIA Usoro gụnyere ịchebe ọrụ na Canada, ịnwe onye ọrụ Canada na-ede akwụkwọ maka LMIA site na Service Canada, na mgbe ahụ onye na-arịọ arịrịọ maka visa ọrụ mgbe LMIA nabatara ya.
Nke a bụ usoro dị ogologo nke nwere ike iduga obibi na Canada na-adịgide adịgide.
3. Nkwado klaasị ezinaụlọ
Ịchịkọta ezinụlọ ka bụ akụkụ dị mkpa nke iwu mbata na ọpụpụ Canada. Ezinụlọ nọ na Canada nwere ike ịkwado ndị ikwu ha ịkwaga obodo ahụ kpamkpam.
Ị ga-abụrịrị nwa amaala Canada ma ọ bụ onye bi na-adịgide adịgide iji mee ya onye nkwado onye ikwu gị.
Nwunye gị na ụmụaka ndị na-erubeghị afọ 22 tozurukwa ịkwado (enwere ihe ndị ọzọ na nke a). N'oge a, ịkwado ndị mụrụ gị ma ọ bụ nne na nna gị ochie abụghị nhọrọ.
Ị nwere ike, Otú ọ dị, weta ha na Canada n'okpuru Mmemme Super Visa.
4. Mmemme Nominee Provincial (PNP)
The PNP mmemme na-eto eto karịa ka ụzọ isi bịa Canada. Alberta, Ontario, British Columbia, na mpaghara ndị ọzọ dị na Canada echepụtala usoro mbata na ọpụpụ nke ha.
Nke na-ebutekarị usoro ọsọ ọsọ.
Ndị anamachọihe n'okpuru ụdị PNP, n'aka nke ọzọ, a na-achọkarị ibi na mpaghara nke ọ bụla mgbe ha rutere Canada.
Ọzọkwa, ka ị ruo eruo maka ọtụtụ PNP, ị ga-enwerịrị ọrụ n'aka azụmahịa Canada.
Mmemme Nominee kwagara mba Alberta (AINP)
Mmemme Nominee Mpaghara British Columbia (BCPNP)
Mmemme Nominee Mpaghara Manitoba (MPNP)
Mmemme Nominee Mpaghara Newfoundland na Labrador (NLPNP)
Mmemme Nominee Mpaghara Ọhụrụ Brunswick (NBPNP)
Mmemme Nominee Mpaghara Nova Scotia (NSPNP)
Mmemme Nominee nke mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ (NTNP)
Mmemme Nominee Immigrant Ontario (OINP)
Mmemme Nominee Mpaghara Prince Edward Island (PEI PNP)
Mmemme Ndị Ọrụ Omenala nke Quebec (QSWP)
Mmemme Nominee Immigrant Saskatchewan (SINP)
Mmemme Nominee Yukon (YNP)
The Otu ndị ọchụnta ego bụ maka ndị nwere oke ọnụ ahịa bụ ndị nweburu ụlọ ọrụ ma ọ bụ jikwaa ụlọ ọrụ na obodo ọzọ.
Ha na-enye aka na uto na ọganihu Canada n'ozuzu site n'ikwe ka ndị ọkachamara azụmahịa nwere ahụmahụ tinye ego na akụ na ụba Canada.
Na Canada, enwere mmemme itinye ego abụọ. Mmemme Investor Federal na Quebec Investor Program.
Mmemme abụọ a yitere n'ihi na ha chọrọ ndị na-eme ntuli aka ka ha nwee ọnụ ahịa net dị elu. Na itinye ego buru ibu na ego ntinye ego akwadoro maka afọ ise.
On ha ngwa, investor kwabatara nwere ike depụta ha di na nwunye na ụmụ dị ka dabere.
Ha kagburu ngwa maka mmemme ọchụnta ego mbata na ọpụpụ gọọmentị etiti na mmemme ọchụnta ego. Ndị ahụ ka nọ na azụ azụ dị ka nke June 2014. Ma Quebec Investor Programme ma ọ bụ Quebec Entrepreneur Programme emetụtaghị.
Ego ole ka ọ na-eri ịkwaga Canada?
Ịkwaga Canada site na ntinye Express na-efu ihe dị ka $2,300 CAD maka otu onye na-achọ akwụkwọ na $4,500 CAD maka di na nwunye.
Ọnụọgụ a agụnyeghị ego mkpezi nke ọtụtụ ndị na-aga ime ga-eweta ka e wee tụlee maka mbata na ọpụpụ Canada.
Nchikota a dịgasị iche dabere na nha ezinụlọ wee malite na ihe ruru $13,000 CAD maka otu onye anamachọihe. Enwere ike itinye ego agbakwunyere ma ọ bụrụ na onye na-achọ akwụkwọ tinye akwụkwọ site na mmemme mpaghara.
Ndị nwere ọrụ Canada na-enye ma ọ bụ tinye akwụkwọ n'okpuru Klas Ahụmahụ Canada adịghị mkpa igosi ihe akaebe nke ego mmezi.
Typesdị niile azụmahịa mbata na ọpụpụ kpata nnukwu ego na Canada.
Ọ nwere ike ịdị mkpa ka onye na-arịọ arịrịọ enyegoro gọọmentị etiti ma ọ bụ mpaghara mpaghara ego n'enweghị ọmụrụ nwa. Ma ọ bụ itinye ego na ụlọ ọrụ Canada.
Iji kwado a nwunye ma ọ bụ nwa dabere, ị naghị enye nkọwa gbasara ego. Ọ bụrụ na ị na-akwado onye otu ezinụlọ ọzọ, dịka a nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ nna ochie, ị ga-egbo mkpa ego iji ruo eru itinye akwụkwọ.
Enweghị oke ego ma ọ bụrụ na ị na-etinye akwụkwọ ihe gbasara mmadụ ma ọ bụ ọmịiko. Naanị ma ọ bụrụ na onye gbara ọsọ ndụ bụ onye na-akwado onwe ya bụ ozi ego dị mkpa n'okpuru ụdị nnabata a.
N'ihe atụ ahụ, òtù Canada na-akwado onye gbara ọsọ ndụ aghaghị igosi na ọ kpalitere ego zuru ezu. Ka ọ kwado maka mweghachi nke onye gbara ọsọ ndụ.
Otu esi esi Naijiria kwaga Canada
Ọbụlagodi n'ime nsogbu ahụ, Canada na-aga n'ihu na-anabata ndị obibi ọhụrụ na-adịgide adịgide. Ndị zutere ihe ndị a chọrọ tupu ha etinye oke.
Yana ndị ọrụ si mba ọzọ nwa oge bụ ndị dị oke mkpa maka inye nri obodo.
Gọọmentị etiti kwupụtara ebumnuche ya ịnabata ihe ruru nde mmadụ 1.1 ndị bi na-adịgide adịgide n'etiti ugbu a na 2022.
N'ime atụmatụ ọkwa mbata na ọpụpụ ekpughere obere oge tupu ọrịa ọjọọ a emetụta Canada.
Ọ bụ ezie na mgbake nke coronavirus nwere ike imetụta ọnụ ọgụgụ ndị a. A ka ga-enwe ọtụtụ ohere ịkwaga Canada n'ọdịnihu dị nso.
Na 2019, ndị Naijiria 12,600 ghọrọ ndị bi na Canada na-adịgide adịgide. Nke ahụ mere ka ọ bụrụ obodo nke anọ kacha nwee ọnụ ọgụgụ mmadụ n'ụwa. Ozugbo India gasịrị (85,585), China (30,260), na Philippines (12,600). (27,815).
Nhọrọ maka ịkwaga Canada Site na Nigeria
Nhọrọ ndị ọzọ bụ, n'ozuzu, dị ka ndị a:
Nhazi akụ na ụba na gọọmentị etiti.
Klas Economic na Province.
Immigrashọn maka azụmahịa, ọkachasị mmemme Visa Start-Up.
Ebe obibi nwa oge mbụ, emesia obibi na-adịgide adịgide.
Nkwado nke otu ezinụlọ.
Ihe Ị Kwesịrị Ịma Banyere Federal Economic Class
Canada na-anabata ọnụ ọgụgụ ndị mbata kacha ukwuu na ngalaba a. Ebe a na-atụ anya na ọkwa kwa afọ ga-agafe 200,000 n'ime afọ atọ na-abịa.
Otu Federal High Skilled bụ nke kachasị n'ime klaasị akụ na ụba.
Mgbe a bịara n'itinye akwụkwọ maka obibi na Canada na-adịgide adịgide site na Nigeria, enwere nhọrọ dị iche iche iji nyochaa.
Mmemme Klas Economic Economic Canada
Federal Ọrụ Ọrụ
Federal ọkà ahịa
Klas Ahụmahụ Canada
Sistemụ mbata na ọpụpụ akụ na ụba gọọmentị etiti Canada na-eji ntinye ngwa ngwa. Ọtụtụ ógbè na-agbaso usoro yiri nke ahụ.
Ndị anamachọihe ga-emecha profaịlụ ntinye Express. Site na profaịlụ kacha nwee akara na-anata oku itinye akwụkwọ na otu mmemme mbata na ọpụpụ edepụtara n'elu.
Mgbe ahụ, ndị na-aga ime nwere ụbọchị 60 iji nyefee ngwa zuru ezu. Ha na-enye ndị na-aga ime ihe ntinye Express dabere na mgbanwe ndị bụ isi. Dị ka afọ, agụmakwụkwọ, ahụmịhe ọrụ, na ịma asụsụ.
Ụgbọ ala akpaaka maka ọrịre nso m
Ọrụ nrụgide dị ala na-akwụ ụgwọ nke ọma
Ụgbọ ala ezinaụlọ kacha mma ịzụrụ
Webụsaịtị ọrụ mbata na ọpụpụ CANADA: Nke a bụ mbata na ọpụpụ Canada Nnọọ weebụsaịtị.
Mmemme Provincial Canada dị ịtụnanya
Mgbe ị na-achọ ịma ka esi akwaga Canada, n'okpuru bụ mmemme mpaghara Canada:
Immigrashọn nke Ontario
Mbata nke Alberta
Immigrashọn nke British Columbia
New Brunswick mbata na ọpụpụ
Mbata nke Newfoundland
Immigrashọn Nova Scotia
Immigrashọn Prince Edward Island
Ọ bụrụ na ị tozughị maka mmemme akụ na ụba gọọmentị etiti. Nzọụkwụ ọzọ na ntinye akwụkwọ maka ebe obibi na-adịgide adịgide bụ ileba anya na iyi iyi mpaghara.
Mpaghara ọ bụla dị na Canada nwere mmemme mbata na ọpụpụ nke ya, nke ahaziri dabere na mkpa ahịa ahịa ọrụ mpaghara.
Enwere ike ịnwe iyi iyi mpaghara na-eche ịnabata gị ma ọ bụrụ na ị nwere nkà dị mma. Quebec nwere njikwa zuru oke na ya usoro mbata na ọpụpụ.
Gụnyere ikike ịtọ ọkwa mbata na ọpụpụ nke ya ma mee mmemme nke ya.
Quebec ewebatala usoro ngosipụta nke mmasị, dịka ntinye Express. N'ime ndị na-eme ntuli aka na-enyefe profaịlụ na usoro Arrima ma nata akwụkwọ ịkpọ òkù itinye akwụkwọ mgbe niile.
Ihe ndị chọrọ ịkwaga Canada
Mmemme mbata na ọpụpụ ọ bụla nwere ụkpụrụ ntozu kacha nta nke ya. Ọ dị mkpa iji nyochaa ntozu gị tupu itinye akwụkwọ.
Gọọmentị Canada ga-arịọ maka ọtụtụ akwụkwọ iji nyochaa ahụmịhe ọrụ gị. Na mgbakwunye na agụmakwụkwọ, njirimara, na akụkọ mpụ na ahụike mgbe ị nyefere ngwa.
Akwụkwọ ị ga-achọ dịgasị iche dabere na mmemme ị na-etinye na ya.
Iji chọpụta akwụkwọ ndị ị ga-achọ, ị ga-achọ ịchọpụta nke mmemme mbata na ọpụpụ dị mma maka gị!
Ụdị ndị ọzọ achọrọ bụ:
Ihe ndị chọrọ ntozu Visa mmalite
Ihe ndị a bụ isi ihe achọrọ maka ịnweta Visa mmalite:
Ụlọ ọrụ na-eru eru.
Achọrọ akwụkwọ nkwado na asambodo ntinye aka sitere na ụlọ ọrụ akọwapụtara.
Ego zuru oke maka mmezi nke anaghị akwụ ụgwọ, dị na nke enwere ike ibufe.
Opekempe Benchmark Asụsụ Canada kacha nta na Bekee ma ọ bụ French.
Mmalite-Up Visa Mmemme chọrọ azụmahịa nwe
Iji ruo eruo maka obibi na-adịgide adịgide, onye ahụ ga-emerịrị ihe ndị a:
Ha ga-etinyerịrị azụmaahịa echere na Canada na ịrụ ọrụ.
Onye anamachọihe ga-enwerịrị opekata mpe 10% nke ikike ịtụ vootu nke ụlọ ọrụ.
Ọ nweghị onye ọzọ nwere ike ịnwe karịa 50% nke ngwaahịa ịtụ vootu na ụlọ ọrụ.
IHE: Otu achụmnta ego achụmnta ego nwere ike ịkwado ngwa nke ruru ise ndị na-aga ime maka obibi na-adịgide adịgide.
Agbanyeghị, enwere ike ịhọpụta ụfọdụ ndị na-aga ime mkpa maka azụmaahịa ahụ.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla mkpa chọrọ wepụrụ ngwa ha. Ma ọ bụ jụrụ, ndị ọzọ niile na-aga n'okpuru otu itinye ego na azụmaahịa ga-ahụ ka agwụchara ngwa ha.
Kedu afọ kacha maka Immigrashọn Canada?
Atụmatụ mbata na ọpụpụ Canada ọ bụla enweghị afọ ole achọrọ. N'ọtụtụ edemede nke mbata na ọpụpụ akụ na ụba. Agbanyeghị, ndị anamachọihe dị afọ 25 ruo 35 na-enweta ọnụọgụ kachasị.
Nke ahụ apụtaghị na a pụghị ịhọpụta ndị toro eto. Ahụmịhe ọrụ dị mkpa, nka asụsụ siri ike, njikọ na Canada.
Na agụmakwụkwọ ka elu nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla furu efu n'ihi afọ ndụ mbata na ọpụpụ akụ na ụba.
Nke a bụ n'ihi na enweghị usoro ọ bụla maka nkwado ezinụlọ na mbata na ọpụpụ ndị mmadụ na ndị gbara ọsọ ndụ na Canada. Enweghị mgbochi afọ.
Otu esi esi na USA kwaga Canada
Ọ ga-amasị gị ịmụta ka esi esi na USA kwaga Canada? Ọ bụrụ ee, wee gee ntị.
Ụmụ amaala nke United States nwere ike itinye akwụkwọ maka ịbụ nwa amaala na Canada. Mana ha ga-ebu ụzọ bụrụ ndị bi na-adịgide adịgide, dị ka mba ndị ọzọ si mba ọzọ.
Ha nwere ike ịchọ ịbụ nwa amaala Canada ka ha jidesịrị ọkwa obibi na-adịgide adịgide ma ọ dịkarịa ala afọ 5.
Usoro maka isi na United States kwaga Canada na nke a na-eji na mba ndị ọzọ. N'ihi ya, n'okpuru bụ ụfọdụ ụzọ kacha mfe nwa amaala US isi bịa Canada:
Inweta ọrụ na-adịgide adịgide
Mmemme Nominee Mpaghara
1. Inweta ọrụ na-adịgide adịgide
Ọbụlagodi na achọghị visa iji banye Canada. Onye ọ bụla chọrọ ịrụ ọrụ na mba ahụ ruo ogologo oge ga-enwerịrị ikike ọrụ.
Agbanyeghị, enwere ihe ole na ole ị ga-emerịrị iji tozuo maka ikike ọrụ:
Ị ga-enwerịrị ọrụ n'aka onye ọrụ Canada
Na mgbakwunye, onye were gị n'ọrụ ga-enwerịrị Ntụle Mmetụta Ahịa Ọrụ (LMIA)
Ọzọkwa, ị ga-enwerịrị ego zuru oke iji gboo onwe gị na ezinụlọ gị ma ọ bụrụ na ha ga-eso gị.
Ọzọkwa, enwela ndekọ mpụ.
Ọzọkwa, jide n'aka na ọ ga-adị mma.
Anyị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ntozu ọrụ na Canada.
Ọ bụrụ na ịnweta ikike ọrụ, ha na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ na Canada maka oge ikike. Site na mgbakwunye ikike ọrụ, nke a nwere ike ịdịru afọ anọ.
Agbanyeghị, ikike ọrụ Canada dị naanị obere oge. Mana ha nwere ike inyere gị aka wulite ahụmịhe na iru eru dị ka onye ọrụ nwere nka. Nke a na-enyere aka ndị ọrụ ala ọzọ nwa oge itinye akwụkwọ maka ma nweta ebe obibi na-adịgide adịgide na Canada.
2. Nkwado ezinụlọ
Ọ bụrụ na ị nwere nwa amaala ma ọ bụ di ma ọ bụ nwunye na-adịgide adịgide, onye mmekọ iwu, ma ọ bụ onye mmekọ na Canada. Ha nwere ike ịkwado mbata gị ebe ahụ.
Ka onye òtù ọlụlụ gị wee kwado gị, ọ ga-abụrịrị ihe karịrị afọ 18. Ga-enwerịrị ndekọ mpụ, nwee ike ịkwado gị n'ụzọ ego, ọ bụghị na enyemaka mmadụ. Ma gosi na ha chọrọ ịnọ na Canada mgbe ị kwagara ebe ahụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị lụbeghị di ma ọ bụ nwunye, ị ga-egosi na ị na-enwe mmekọrịta di na nwunye ma ọ bụ na unu ebirila ọnụ ruo oge ụfọdụ.
Nke a nwere ike ịgụnye igosi na ị na-ekerịta ihe onwunwe, kwụọ ụgwọ ọnụ, ma jiri otu adreesị na akwụkwọ ndị dị mkpa.
Mgbe ahụ, ma gị na onye gị na ya ga-etinyerịrị akwụkwọ maka nkwado na ebe obibi na-adịgide adịgide na Canada n'otu oge.
3. Visa mmalite
Visa mmalite bụ mmemme gọọmentị Canada na-enye. Ọtụtụ n'ime ndị ọchụnta ego mba ụwa nwere echiche ụlọ ọrụ pụrụ iche. Mmemme mmalite a ga-enye ndị US ndị na-achọ ịkwaga Canada ma malite azụmahịa.
Visa mmalite nke Canada, dị ka ụdị visa ndị ọzọ, gụnyere usoro mmachi na njirisi ntozu. Ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala US na-achọ ịkwaga Canada wee malite azụmahịa, ị ga-egosi na ị nwere ike:
Nweta azụmahịa nke tozuru oke.
Nwee akwụkwọ nkwado sitere n'otu nzukọ. Na Canada, ụlọ ọrụ ekwenyere na-enye nkwado na nkwado maka ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Ị nwere ego zuru oke iji gboo mmefu gị ruo mgbe ụlọ ọrụ gị nwetara ego.
Ọ bụrụ na ị tozuru maka visa mmalite Canada, ị ga-enyerịrị akwụkwọ na ụdị niile dị mkpa mgbe itinye akwụkwọ.
4. Ntinye Express
Sistemụ ntinye Express bụ usoro mbata na ọpụpụ eletrọnịkị Canada dabere na isi. Ọ na-enye ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa niile ohere ịbanye ma mepụta profaịlụ nke ha.
Nke gụnyere ozi gbasara talent ha, agụmakwụkwọ na ahụmịhe ọrụ ha.
Agbanyeghị, ha nwere ike nweta isi site na ngụkọ nke gọọmentị Canada mepụtara dabere na ndị ahụ.
Anyị na-atụkwa isi ihe ndị a dị ka Comprehensive Ranking Scores (CRS). Ma ka CRS gị dị elu, ọ ga-abụ na a ga-akpọ gị ka ị tinye akwụkwọ maka obibi na Canada na-adịgide adịgide.
Dịka ọmụmaatụ, ịnweta nhọpụta site na mpaghara ga-enweta gị 600 isi.
Ndị ọchịchị mpaghara na-eritekwa uru na ntinye ngwa ngwa. Nhọpụta mpaghara na-ebuli akara gị elu. Mana, ịmalite, ị ga-ebu ụzọ mepụta profaịlụ ntinye Express, nke ga-achọ akwụkwọ ndị a:
Akwụkwọ njem (passport)
Nsonaazụ nke ule asụsụ
Ọzọkwa, kọọ akụkọ maka nzere nzere agụmakwụkwọ
Ọzọkwa, nhọpụta site na mpaghara (ọ bụrụ na ị nwere otu)
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere otu, ọrụ ederede sitere n'aka onye ọrụ Canada. Ihe akaebe nke ahụmịhe ọrụ na asambodo ntozu na ọrụ azụmaahịa nke mpaghara ma ọ bụ ókèala Canada nyere bụ ihe niile achọrọ (ọ bụrụ na ị nwere otu)
Ọ dabara nke ọma, ọ bụrụ na ha kwadoro profaịlụ ntinye Express gị, a ga-agbakwunye gị na ọdọ mmiri ndị a ga-eme ntuli aka. Usoro dabere na isi ga-enye gị ọkwa na ọdọ mmiri ntinye Express.
Ọzọkwa, ndị na-aga ime nwere akara kacha elu na ọdọ mmiri ahụ na-anata akwụkwọ ịkpọ òkù itinye akwụkwọ. Ma ị ga-enwe ụbọchị 90 iji tinye akwụkwọ anamachọihe obibi na-adịgide adịgide.
Ajụjụ gbasara Otu esi aga Canada
N'okpuru bụ ụfọdụ Faqs gbasara otu esi akwaga Canada:
1. Gịnị bụ mbata na ọpụpụ klas ezinụlọ?
Mbugharị nkwado klas ezinaụlọ dị maka ndị a na-eme ntuli aka nwere ndị ezinaụlọ bụbu ndị bi na-adịgide adịgide ma ọ bụ ụmụ amaala.
2. Kedu ndị ezinaụlọ nwere ike ịkwado maka mbata na ọpụpụ Canada si Nigeria?
Onye mmekọ-iwu nkịtị
Ụmụnna nwoke ma ọ bụ ụmụnne nwanyị, ụmụ nwanne ma ọ bụ ụmụ nwanne, ụmụ ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ ụmụ. Ọ bụrụ na ọ bụ nwa mgbei, n'okpuru afọ 18, na ọ bụghị di na nwunye ma ọ bụ na mmekọrịta iwu.
Onye ikwu ọzọ nke afọ ma ọ bụ mmekọrịta ọ bụla mana ọ bụ naanị n'okpuru ọnọdụ akọwapụtara
Ndị ikwu nke ndị a na-eso (dịka ọmụmaatụ, di na nwunye, onye mmekọ, na ụmụaka dabere).
3. Kedu ihe a chọrọ iji bụrụ onye nkwado?
Nke mbụ, ị ga-enwerịrị opekata mpe afọ iri na asatọ.
Onye ikwu gị akwadoro na ị ga-abanyerịrị nkwekọrịta nkwado nke ị na-eme iji kwado onye ikwu gị n'ụzọ ego ma ọ dị mkpa.
Tụkwasị na nke ahụ, nkwekọrịta ahụ na-ekwu na onye na-aghọ onye na-adịgide adịgide ga-agbalịsi ike ịkwado onwe ya.
Site na ụbọchị ha ghọrọ onye obibi na-adịgide adịgide, ị ga-enyerịrị di na nwunye enyemaka ego. Ma ọ bụ onye mmekọ ọnụ, ma ọ bụ onye ọlụlụ ruo afọ atọ.
Ị ga-enyerịrị nwa na-adabere na ya afọ iri ma ọ bụ ruo mgbe nwata ahụ ruru afọ iri abụọ na ise, nke ọ bụla na-ebute ụzọ.
Ụgbọ ala akwara ochie
Olee otú Tọgharịa iPhone kpamkpam
Ụgbọ ala egwuregwu dị ọnụ ala
Ụgbọ ala ngwakọ eji
Mmemme ndị ọrụ gọọmentị etiti, ebe emebere nke ọma ịhọrọ ndị gụrụ oke akwụkwọ. Ọ naghị akwado ndị na-achọ akwụkwọ site na nka nka, dịka amụma CIC siri dị.
Ndị tozuru etozu azụmaahịa nwere ike itinye akwụkwọ maka obibi na-adịgide adịgide. N'okpuru Mmemme Azụmahịa Ndị Ọkachamara Federal. Nke a chọrọ ịhụ na ahịa ọrụ Canada na-adọta ndị nwere nkà zuru oke.
N'ikpeazụ, ha gbara ndị nwere mmasị itinye akwụkwọ maka ebe obibi na-adịgide adịgide ume ịkpọtụrụ anyị n'oge ntụrụndụ ha. Na/ma ọ bụ dejupụta akwụkwọ nyocha.
Anyị ga-enyocha nhọrọ gị mgbe ọ bụla anyị nwetara ha.
Biko hapụ ajụjụ gbasara isiokwu a (Otu esi aga Canada) na ngalaba nkọwa. Ịkwesịrị ịdebanye aha iji nweta ọkwa mgbe ebipụtara ihe ọhụrụ.
Tags:Webụsaịtị gọọmentị mbata na ọpụpụ Canada, ụzọ kacha mfe ịkwaga Canada, mbata na ọpụpụ ezinụlọ na Canada, ka esi akwaga Canada na-enweghị ọrụ, otu esi esi UK kwaga Canada, ka esi esi na anyị kwaga Canada, ka esi akwaga Canada n'enweghi ego, ịkwaga Canada chọrọ
Balance Kaadị Connecticut EBT: Nzọụkwụ dị mfe iji lelee ego EBT gị
Okwu 30+ gbasara ọnwụ nke nkịta 2022 yana otu esi anagide mfu ahụ
Otu esi eme IRS oge nhọpụta & ihe ị ga -eme tupu ịme otu
Nyocha Ọchịchị Alaeze Taa Taa 2022: Alaeze Ukwu Taa ọ dị mma?